विवाद छिटो टुंग्याऊ | eAdarsha.com
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै आफ्नो पार्टीको चुनावी भाषणको क्रममा भारत सरकारले लिपुलेका भएको बाटो चक्ल्याउने कुरा बताएपछि नेपालमा त्यसको तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हो । त्यो नेपाली भूभागलाई भारतीय सुरक्षा सैनिकहरुले जबर्जस्ती कब्बा गरिराखेका छन् । भारत सरकारले ती क्षेत्रहरुलाई आफ्नो नक्सामा देखाएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो । त्यो विरोधको कदर गरेर सरकारले संसदबाट पारित गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो । सरकार ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा राखेर भारतसँग त्यसबारे वार्ता गर्न पत्र लेखेको थियो । त्यसबेला भारतले कोभिड–१९ को महामारीका कारण बैठक सम्भव नभएको बताएको थियो ।
नेपाली ती विवादित भूमिबारे यथाशीघ्र वार्ता गर्न चाहेको छ । त्यसको जानकारी भारत सरकारलाई पठाइसकिएको पनि छ । तर भारत वार्तालाई पन्छाउँदै छ । एकातिर त्यसले वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन भने अर्कोतिर ती क्षेत्रमा आपूm खुसी भौतिक पूर्वाधार तयार गर्दै छ । विवादित क्षेत्रमा केही गर्न परे त्यसले नेपालसँग परामर्श लिनुपर्दछ । तर त्यसले त्यसो गरेको छैन । त्यसले आपूm खुसी प्रयोग गरिरहेको छ । यो त्यसको मिचाहापनको नमूना हो ।
भारतको यस्तै मिचाहापनले गर्दा नेपालमा भारतको प्रभाव नराम्रो हुँदै गएको छ । या अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारतको नेपालसम्बन्धी नीति असफल भएको छ । भारतीय नीति निर्माताहरुले भारतले नेपाललाई यत्ति धेरै सहयोग गरेको छ, तैपनि नेपालीहरुले भारतलाई किन गराउँदैन भनी भन्ने गर्दछन् । भारतका एकजना कुटनीतिज्ञले लेखेको किताबमा पनि त्यो प्रश्न गरिरहेको छ । किताबमा प्रधानमन्त्री मोदी आफंैले त्यो कुटनीतिक व्यक्तिसँग त्यो प्रश्न सोधेको उल्लेख छ । भारतका नीति निर्माताहरुबीच भएको त्यो कुराले उनीहरुलाई नेपालबारे यथार्थ कुरा थाहा नै नभएको देखिन्छ । निश्चय नै नेपालमा भारतको प्रभाव राम्रो छैन । यो हामी पनि भन्छौं तर उनीहरुले किन भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दथ्यो । किन भनेर प्रश्न सोधिएमा त्यसको जवाफले वास्तविकता छर्लंग हुन्थ्यो । नेपालीहरुले भारतीयहरुले आपूmसँग समानताको व्यवहार गरोस्, थिचोमिचो नगरोस् र विवादास्पद समस्याको छिटो समाधान गरोस् भन्ने चाहन्छन् । दुई देशबीचको सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गरी प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले तयार गरेको प्रतिवेदनसमेत भारतले बुझेको छैन । यस्तो व्यवहारवारे के नेपालीहरु भारतसँग खुसी हुन सक्छन् ? हामी सोध्न चाहन्छौं, यस्तो व्यवहार भारतले किन गर्दछ ? समय धेरै अगाडि बढेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध पनि समयानूकूल हुनुपर्दछ । विवादको छिनोफानो छिटो हुनुपर्दछ । कानमा तेल हालेर बस्ने बेला यो होइन ।